Mpv bụ ọkpụkpọ vidiyo na-emeghe emeghe nwere koodu AV1 | Gam akporosis
Mpv bụ ihe ọkpụkpọ vidiyo na-emeghe emeghe ma gbakwunye nkwado na ntụgharị vidiyo AV1
Nwere ike ịchọta karịa ihe ndị ọzọ na-atọ ụtọ maka ngwa ndị kachasị mkpa anyị nwere na gam akporo. Bụ Mpv onye na-emeghe iyi ọkpụkpọ vidiyo nwere ike ghọrọ n'ime ọzọ na-adabere mgbe niile na mkpa anyị nwere.
A ọkpụkpọ vidiyo na kemgbe emelitere site na nkwado ntụgharị koodu AV1 na na site n'eziokwu a, anyị nwere ike ikwu maka ezigbo ụzọ ọzọ na ọtụtụ ndị ọzọ. N'oge a ọ dị ka ihe dị ize ndụ iji tụnyere ya VLC, ebe ọ bụ na n'etiti ụfọdụ atụmatụ ọ nwere ohere ịgbasa na telivishọn anyị site na Chromecast.
1 Ezigbo uzo: Mpv
2 N'oge ahụ na beta
3 Etu esi ebudata mpv na gam akporo
Ezigbo uzo: Mpv
Mpv bụ ọkpụkpọ vidiyo ọhụrụ nke na-aga ihe dị mfe yana interface na-esiteghị na interface, ebe ọ bụ onye nyocha faịlụ na Ọ ga-enye anyị ohere inyocha folda iji kpọọ vidiyo niile na anyi nwere n'ime ha.
Eziokwu ahụ bụ na anyị na-ekwu maka Mpv taa bụ n'ihi mmelite ọhụrụ na-akwado mkpebi ntụgharị AV1 ma mepee ụzọ maka nnabata usoro vidiyo ka ukwuu. Ekwe omume nke na-akpali site na ntaneti audio na audiotrack API n'ihi na mgbe i nwere nsogbu na Bluetooth audio na equalizers.
Mpv abụghị ọkpụkpọ vidiyo "ọhụụ", ma ọ dịla na Windows ruo ogologo oge. Kpamkpam na n'elu ikpo okwu na ọ ghọọ onye ọzọ na VLC na e nwere ọtụtụ ndị ọrụ na-ahọrọ ya n'ihi na ọ naghị enye ọtụtụ nsogbu mgbe gụgharia site na esịtidem netwọk.
N'ezie nsogbu bụ mgbe hapụ ara ara iyi na netwọk na-aga azụ ya ka VLC ebula ya site na ọnọdụ ebe anyị gaara akwụsị ile usoro ma ọ bụ ihe nkiri. Mpv na akụkụ a na-arụ ọrụ zuru oke na maka ndị ejiri ụdị ọwa a na-egwu ọdịnaya site na eriri ha ma ọ bụ njikọ WiFi, ọ bụ karịa ezigbo ọzọ.
N'oge ahụ na beta
Mpv di na beta ma anyi enweghi ike ibudata ya na Storelọ Ahịa Play. N'ezie, anyị ga-agafe Github iji chọta ebe nchekwa ya wee si na ya budata APK ya. Ọ bụ ngwa eji emepe emepe ma nke a bụkwa nnukwu eziokwu itinye uru dị ka ndị a ndị ọzọ anyị matara n’izu a; Krita dị ka ngwa ịbịaru yana Ihe aga-eme na-akawanye mma dịka ihe ọzọ edeturu na ngwa emeghe isi.
Na gam akporo ọ dị oke nkenke na ọkwa ọhụụ na interface, na anyị ga-anọ na ụfọdụ n'ime ya nhọrọ ndị dị otú ahụ dị ka ndabere playback, tinye faịlụ na playlist, emeghe mpụga ndepụta okwu, nkwado maka ngwaike nyopụta, mmegharị maka akara dị ka nchapụta, olu ma ọ bụ kwupụta n'ihu, njikwa nke ndepụta okwu, mgbanwe asụsụ ọdịyo, folda ụlọ ọhụrụ maka faịlụ ma ọ bụ ikike imeghe URL.
na ọkpụkpọ nwere nnọọ mfe interface, ma na nhọrọ ndị bụ isi na njikwa mmegharị ahụ nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta mmekọrịta maka ụbọchị anyị nọ na ya. Atụla anya ihe ọ bụla na-acha ọkụ ọkụ na interface ahụ, ebe ọ bụ na ọ dị ka anyị ga-echere ya.
Etu esi ebudata mpv na gam akporo
Mpv dị site na nchekwa ma anyị nwere ike ibudata ya:
Anyị na-aga ebe nchekwa gị na Github
Anyị na-agbada ruo mgbe anyị ga-achọta Akụ
Anyị na-agbatị site na akara ngosi akụ ala
Anyị na-ebudata mpv-gam akporo-2020-05-27.apk
Mgbe niile APK n'ihi na ị ga-ahụ ụdị ọzọ ụbọchị ị gụrụ usoro ndị a
Ya mere, ị nwere Mpv dị na gam akporo na ị pụrụ ịnụ ụtọ ihe na-emeghe iyi video ọkpụkpọ na-aga na-mma. Anyị ga-agbaso ụzọ ahụ, ebe ọ ga-amanye VLC itinye batrị ahụ; N'ọnọdụ ọ bụla, maka nke ikpeazụ anyị na-echerịrị ọhụụ ọhụrụ na, n'ihi njigide nke ndị mmepe ya kesara n'oge na-adịbeghị anya, dị mma karịa; dị ka anyị na-emeri mgbe niile na nke a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mpv bụ ihe ọkpụkpọ vidiyo na-emeghe emeghe ma gbakwunye nkwado na ntụgharị vidiyo AV1
Etu esi etinye onyonyo eserese site na iji foto Google na-ejighi igwefoto
Snapdragon 865 na-eme ka ọ maa jijiji: Samsung ịmalite ịmalite mmepụta nke Exynos 992 na Ọgọstụ